Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - InstaZOOM
Siyaasadda Data Protection
Bogga ugu weyn » Siyaasadda Data Protection
Waxaan qiimaynaa sirtaada Si loo ilaaliyo qarsoodinimadaada, waxaan jeclaan lahayn inaan ku ogeysiino dhaqamadayada macluumaadka onlaynka ah iyo doorashooyinka aad leedahay ee ku saabsan ururinta iyo isticmaalka xogtaada. Waxaanu ogeysiiskan ka bixinaynaa mareegahayaga iyo dhammaan meelaha xogta shakhsi ahaaneed laga codsan karo si ay u sahlanaato in la helo.
Google Adsense iyo DoubleClick DART cookies
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies-ka Google, oo ah bixiye xayaysiis koox saddexaad ah, si loogu adeego xayaysiisyada. Google waxay isticmaashaa cookies-ka DART si ay ugu adeegto xayeysiisyada dadka booqda mareegahan iyo mareegaha kale ee internetka.
Waxaad joojin kartaa isticmaalka cookies-ka DART adiga oo aadaya ciwaanka soo socda: http://www.google.com/privacy_ads.html. Dhaqdhaqaaqa isticmaalaha waxaa lagula socdaa cookies-ka DART, kuwaas oo ku xiran siyaasadda gaarka ah ee Google.
Kukiyada waxa isticmaala xayaysiisyada qolo saddexaad ama shabakadaha xayaysiisyada si ay u ururiyaan macluumaadka ku saabsan hawlaha isticmaalayaasha mareegtan, tusaale; B. Immisa qof ayaa soo booqday mareegahaaga iyo haddii ay arkeen xayeysiisyo khuseeya. Instazoom.mobi ma laha marin u helida ama xakamaynta cookies-kan, oo ay isticmaali karaan qolo saddexaad.
Macluumaadka shakhsiyeed waa la ururiyaa.
Haddii adiga instazoom.mobi Booqo, ciwaanka IP-ga ee mareegaha iyo taariikhda iyo wakhtiga gelitaanka waa la duubayaa. Macluumaadkan waxa kaliya loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo qaababka, maamulida mareegaha, la socodka dhaqdhaqaaqa isticmaalaha iyo ururinta xogta guud ee isticmaalka gudaha. Tan ugu muhiimsan, ciwaanka IP-ga la duubay kuma xidhna macluumaadka shakhsi ahaaneed.
Xiriirinta mareegaha dibadda
Waxa aanu ku siinay isku xidhka degelkan si ay kuugu habboonaato iyo tixraac. Annagu mas'uul kama nihin siyaasadaha khaaska ah ee shabakadahan. Waa inaad ka warqabtaa in siyaasadaha gaarka ah ee mareegahaan ay ka duwanaan karaan kuwayada.
Hadalkan waa la cusboonaysiin karaa wakhti kasta anaga oo go'aankeena ah. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto siyaasadda sirnimada ee instazoom.mobi fadlan nagala soo xidhiidh [emailka waa la ilaaliyay]
© 2021 - 2022. Xuquuqda oo dhan way xifdisan yihiin - instaZoom.Mobi